हिमाचल प्रदेशमा भ्रमण गर्ने गोप्य ठाउँ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 24, 2021 फेब्रुअरी 23, 2021 राहुल अरोरा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, विशेष समाचार, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B
हिमाचल मा यी स्थानहरु को एक पुरानो, छुआछी सुन्दरता छ, तपाइँ आफ्नो साथी को पक्ष उजागर गर्न को लागी सही, र आफैलाई पनि!
तपाईंको विन्डोज तल रोल गर्नुहोस् र तपाईंको पार्टनरको कपालमा शीतल हावा महसुस गर्ने अल्ट्रा रोमान्टिक अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्।
हिमालयको आकर्षण यस्तो छ।
हामी शर्त लगाउँछौं कि तपाईंले पहिले यी ठाउँहरूका बारे सुनेका छैनौं! र यदि तपाईं "त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, त्यो गर्नुभयो" भने हामी तपाईंलाई मन पराउनेछौं यदि तपाईं टिप्पणी गर्नुहुनेछ र तपाईंको यात्रा कथाहरू साझा गर्नुभयो भने। हामी तपाईंको लागि तल सूचीत गर्दछौं हिमाचल प्रदेशमा अफबीट ठाउँहरू त्यो वास्तविक धेरै अफबीटको लागि हो!
हिमाचल मा यी स्थानहरु को एक पुरानो, छुआछी सुन्दरता छ, तपाइँ आफ्नो साथी को पक्ष उजागर गर्न को लागी सही, र आफैलाई पनि! एकचोटी हेर्नु:
१. शुजा, सेराज उपत्यका
शुजा एक जादुई आश्चर्य हो कि तपाइँको प्रेमी संग खोज। यदि तपाईं हातहरू समात्ने सपना देख्नुहुन्छ तपाईं प्रकृतिको शुद्ध परिवेशमा हिंड्दै गर्दा, सेराज क्षेत्र उपयुक्त छ।
सेराज उपत्यका यसको छिमेकी ब्यास उपत्यका जस्तो प्रसिद्ध छैन, र यो नै हिमाचल प्रदेशको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो।
हामी तपाईंलाई अर्को हराएको स्वर्गमा जानको लागि सिफारिश गर्दछौं।
नजिकका चासोका ठाउँहरू:
१) झरना पोइन्ट
२) जालोरी पास
)) सेरोलोसर ताल
)) तीर्थन उपत्यका
)) रघुपुर फोर्ट
छरिएको उजाडस्थान, ध्यान मौन, र Shoja को सरासर कच्चा सुन्दरता! अनगिन्ती सम्झनाहरू बनाउन उत्तम वातावरण।
प्रत्येक समय यहाँ बिताएको कल्पना कल्पना भन्दा कम छैन।
सेराजको जादू केवल यसको प्राकृतिक परिदृश्यमा मात्र छैन तर स्थानीय मानिसहरूमा न्यानोपन - अतिथि सत्कारमा पनि छ।
तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि तपाईको जीवनसाथी जत्तिकै लजालु मान्छेलाई यहाँ नयाँ साथी बनाउन को लागी सरल छ!
२.आन्ड्रेटा, हिमाचल प्रदेश
यदि तपाईंले एक पुरानो प्राण, कलाको प्रेमीको मुटु कब्जा गर्नुभयो भने; शान्तिमय गाउँ र कलाकारहरूको उपनिवेश को लागी-एन्ड्रेटा.
कula्गरा उपत्यकाको चिया बगैंचाबाट १ km किलोमिटर टाढा धौलाधार दायराको हिउँले ढाकिएको चुचुरोमुनि। हिमाचलको यो अपबिट ठाउँ सरसफाइ, सरलता, र सौन्दर्य संग सुन्दर र सुगन्धित छ।
१) चिया बगैंचा
२) सौरभ भान विहार
)) बीयर बिलि
)) पong्ग बाँध
Andretta केहि अर्को साधारण हिमालयन गाउँ हो। तपाईं Andretta मा शोभा सिंहको काम को सानो परिवार चलान गैलरी भ्रमण र यहाँ केहि चित्रहरु को प्रिन्ट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। स्थान पनि माटो बर्तन समाज छ।
के भन्ने, सँगै एक राम्रो पहिलो पटक अनुभव हुन सक्छ। एक बहाना भिन्न प्रकारको घनिष्ठ साझेदारी गर्न, तब नियमित शहर जीवनले अनुमति दिन्छ।
साहो हिमाचल प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो गाउँ मध्ये एक हो। ग्रीष्म inतुमा रूखहरूको खोरमा लुकेका यो सुनौलो-हुउड गाउँमा परिणत हुन्छ। तपाइँले छनौट गरेको कुनै पनि समय, साहो कहिल्यै निराश हुनेछैन।
सूर्यास्तमा भिजाउनको लागि 'साल नदी' किनार बेलुका साँझको टहलमा जानुहोस्। त्यहाँ चारै तिर टेरेस्ड फार्मल्याण्डहरू छन् जुन साहो निर्दोष 'हिमालय चित्रकला' जस्तो देखिन्छ।
१) लक्ष्मी नारायण मन्दिर
२) Dainkund पीक
)) चमेरा ताल
)) रंग महल
यस मनमोहक गाउँमा अवस्थित चन्द्रशेखर मन्दिर एक भव्य मन्दिर हो। गाउँले सजीलो पहुँच गर्न सक्दछ किनकि यो चम्बादेखि २० किलोमिटर टाढामा छ।
नरकण्डा, ,,१०० फिटमा, शिमलाबाट दुई घण्टाको दूरीमा छ। दुई लाई जोड्ने सडक आफैमा एक सुन्दर यात्रा हो। तपाइँको विन्डोजलाई रोल गर्नुहोस् र तपाइँको पार्टनरको कपालमा शीतल हावाको अनुभव भएको अल्ट्रा रोमान्टिक अनुभव पाउनुहोस्।
१) तन्नी जुब्बार
२) स्टोक्स फार्म
)) हसन उपत्यका
हटु शिखर सम्म ट्रेक गर्नुहोस्, बाटोमा हफ र पफ। एक अर्कोलाई उत्प्रेरित गर्नुहोस् र क्रमिक चढाई मार्फत समर्थन गर्नुहोस् किनकि शीर्षबाट दृश्य सबै यसको लागि लायक छ।
बिरोधक पीर पञ्जालको हिउँले ढाकिएका पहाडहरूको अबाधित दृश्य!
नरकण्डा हिउँदमा स्कीइ like जस्ता साहसिक खेलहरूको लागि पनि तातो ठाउँ हो।
सुझाव गरिएको पढ्नुहोस्: हिमाचल प्रदेश भ्रमण गर्न सर्वश्रेष्ठ ठाउँहरू
यसलाई कोष्ट्म्पी पनि भनिन्छ, कोठी एक पुरानो गाउँ हो, ठाउँ हो, तपाईको रोस्ने सपनाको ठीक बाहिर। कल्पको सानो मुनि र नजिकैको रेकong्ग पियो, काल्पनिक किन्नौर उपत्यकामा। कल्पाबाट पैदल हिड्ने सबैभन्दा उत्तम मार्ग यही हो।
गाउँ खुला मैदान र दाखबारीहरूले सजिएको फल रूखहरूले घेरिएको छ। किन्नर कैलाश शिखरको भव्य ब्याकड्रपहरूमा उठ्नुहोस्।
त्यो आवाज कस्तो छ?
१) बर्लंगा मठ
)) सांगला उपत्यका
देवीको एक उत्कृष्ट सुनको छवि यहाँ सम्मिलित छ। कोठी मन्दिरको श्रद्धा प्रेरणादायक वास्तुकला शैली छ। यस लुकेको रत्नको टाढाको वास्तविक खजाना हो। उत्तम मर्मत मार्ग, तपाईंको म्यूजको वरिपरि लेज गर्नका लागि।
सौन्दर्यको साथ एक स्थान यति वास्तविक छ, तपाईंले आफ्नो प्रेमीलाई पिन्च गर्नु पर्नेछ उनीहरूलाई यो वास्तविक हो भनेर थाहा दिनुहोस्!
हिमाचलको अफबीट ट्रेलहरूको सूचीले तपाईंलाई हिमाचलको मुटुमा पुर्‍याउँछ!
यसको कच्चा पहाडी मानिस संस्कृति।
उनीहरूको सर्वश्रेष्ठमा हिमालयन गाउँहरू साक्षी दिनुहोस्
फराकिलो हरियो मटर क्षेत्र,
महिला छाला भन्दा बढी पृथ्वी,
बुढेसकालका मानिसहरू सनबाथिंग,
नाजुक अझै जंगली र स्वतन्त्र!
गहिरो विश्वासको साथ हामी आत्माको पूजा गर्छौं र ढु stone्गा पनि त्यस्तै बनाउँछौं।
हाम्रो महान भूमिमा एक जना घुम्न स्वागत छ!
हिमालयको आकर्षण यस्तो छ। दृश्य र कथाहरूको विविधता दिनुहोस् जुन यी सानो बस्तीहरू बुनाईले रोमान्सलाई पूरै नयाँ परिभाषा दिन्छ।
सम्बन्धमा हुनुको उत्तम भागहरू मध्ये एक गो गो ट्राभल बड्डी हुनु हो!
सँगै यात्रा को एक उत्तम भाग को नयाँ स्थानहरु अन्वेषण गर्दा एक पटक असीमित रही छ
तपाईको प्रेमीलाई भेट्ने उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हिमाचल प्रदेश हो।
भारतको सबैभन्दा शान्तिमय राज्यहरु मध्ये एक, हिमाचलको वातावरण रोमान्स सास।
ईन्टिमेट सेटिंग्समा साहसिक गतिविधिहरू। केहि शान्ति, कतै तपाईसँग सबै विचारहरु हुन सक्नुहुन्छ ... जुन हामी एक आदर्श रोमान्टिक भगदानी भन्दछौं! हाम्रो अन्वेषण गर्नुहोस् हिमाचल यात्रा प्याकेजहरू जs्गलमा सर्वश्रेष्ठ रोमान्टिक भाग्ने योजनाको लागि।
राम्रा स्थानहरू सांप्रदायिक समाचार
Rahul Arora isaDigital Marketing Expert and guest blogger. He covers topics like Technology, education, travel, digital marketing, and entertainment. He loves to learn new things and continued blogging and keeps on inspiring other bloggers foraliving. He also loves to explore new terrains in different corners of the world. He believes in the idea of ‘Live and let live.SEO ब्लग